. Sunday, 15 January 2012
အထက်ပါအတိုင်း တစ်ခုမှ မဟုတ်သော စကားဝှက် တကယ်လို့များ အပေါ်ဘက်လေးခုထဲက တစ်ခုခုနဲ့ ကိုက်ညီနေပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စကားဝှက်တွေကို အခြားသူတွေက အလွယ်တကူ ခန့်မှန်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး အင်တာနက်ထဲမှာ â€œကျွန်တော်မသိတဲ့ ကျွန်တော် â€ တွေ အများကြီး ပေါ်လာနိုင်ပါတယ် ...
အသုံးများသော အဘိဓါန်စကားလုံးများ အပေါ် အခြေခံထားခြင်း ...ပြောင်းပြန်ပြုထားခြင်း (ဥပမာ - â€œtercesâ€)
မှတ်ချက် - စကားဝှက် လုံခြုံမှုအတွက် သော့ချက် အကျဆုံးအရာမှာ စကားဝှက်အတွင်းပေါင်းစပ် ပါဝင်နေသော အရာများအပေါ် â€œထွင်းဖောက်နိုင်မှုâ€ (Crackability) အပေါ်တွင် တည်နေသည် ...
အောက်ပါတို့အနက် တစ်ခုစီ အနည်းဆုံး ပါဝင်လျက် ရှိခြင်းကိန်းဂဏန်းများ (0..9)
ဆောင်ရွက်ရမည့် အလေ့အကျင့်များ လုံခြုံ အားကောင်းသော စကားဝှက်များ ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် အလေ့အကျင့်များကောင်းတွေကတော့
အချို့သော Trojan hosrse များသည် မိမိတို့၏ စကားဝှက်များကို ခိုးနိုင်ရန်အတွက် မိမိသုံးနေကြ ၀က်ဘ်ဆိုက် တစ်ခု၏ မူလစာမျက်နှာ အတုတစ်ခု ဖန်တီးကာ User Name နှင့် Password တို့ကို ထည့်သွင်းခိုင်းလေ့ ရှိတတ် ကြသည်။ ထို့ကြောင့် -မိမိဝင်ရောက်ရမည့် နေရာသည် မှန်ကန်မှုရှိမရှိ အမြဲ သတိထား စစ်ဆေးခြင်း..
Source : everlearner ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းရှိပြီးသူ
Facebook ပေါ်မှာ ဗီဒီယို floating ဖြစ်နေအောင် ပြုလုပ်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမွိုင် သို့ လျှို့ဝှက်ခရီးစဉ်(သုတေသီမြင့်ထွန်း)
Senior General Min Aung Hlaing receives Special Envoy of Japanese Government and President of Nippon Foundation
ဖုနျးကနေ CCTV or Webcam အဖွဈ အသုံးပွုနိုငျသော-tinyCam Monitor PRO v6.1.2 Apk
သိထားသင့်တဲ့ ကွန်ပျူ တာဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်အလက်များ...